Izinhlobo zeziqu ezimaphakathi ku-Vocational Training | Ukwakheka kanye nezifundo
Izinhlobo zamadigri aphakathi ku-Vocational Training
UMaria Jose Roldan | 07/01/2022 12:21 | Ukuziqeqesha
Akungabazeki ukuthi ukukhetha umsebenzi omuhle nsuku zonke kuyinkimbinkimbi futhi kunzima. Baningi abantu abanquma ukuqeqesha nokwandisa ikharikhulamu yabo, bafunde iziqu ezithile zasenyuvesi. Enye indlela yokuqeqesha futhi ukwazi ukufaka isicelo somsebenzi yi-Vocational Training.
Amadigri ahlukene akhona ku-VET asebenza kahle uma kuziwa ekukwazini ukufaka isicelo sesikhundla emakethe yezabasebenzi ebanzi. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma ngamadigri aphakathi ahlukene ongawathola ku-FP nokuthi ungafinyelela kanjani kuzo.
1 Iyini i-medium degree?
2 Kudingekani ukuze uqedele idigri ephakathi ekuqeqesheni umsebenzi?
3 Amakilasi ebanga eliphakathi
Iyini i-medium degree?
Iziqu ezimaphakathi zingafakwa kulokho okwaziwa ngokuthi Ukuqeqeshwa Okuthile Komsebenzi Wezandla. Lolu hlobo lwe-FP lwenziwa ukuze abafundi bakwazi ukuqeqesha emkhakheni othile futhi bafinyelele ngokushesha emhlabeni womsebenzi. Ngaphandle kwamabanga aphakathi, kukhona amabanga aphezulu kanye nokuqeqeshwa okuyisisekelo kwemisebenzi yezandla. Amabanga aphakathi awalutho ngaphandle kwezifundo zobungcweti, abafundi abalindele ngazo ukuze ukwazi ukuthuthukisa umsebenzi othile noma umsebenzi othile.
Emabangeni aphakathi, ukuqeqeshwa kuthatha iminyaka emibili. Kulezi ziqu, abafundi bathola ukuqeqeshwa kwethiyori kanye nokusebenza. Into engcono kakhulu ngamadigri aphakathi kwe-VET ukuthi ingxenye engokoqobo ithatha indawo yokuqala kunethiyori. Lokhu kuyinto ebalulekile lapho abafundi behamba bewulungele ngokuphelele umhlaba womsebenzi.
Kudingekani ukuze uqedele idigri ephakathi ekuqeqesheni umsebenzi?
Lowo muntu ofuna ukwenza iziqu ezimaphakathi zeVET, kumele ahlangabezane nochungechunge lwezidingo:
Yiba Neziqu Zesikole noma idigri yezemfundo ephakeme.
Yiba nesihloko esithi I-FP Eyisisekelo.
Uneziqu zezobuchwepheshe o Uchwepheshe Osizayo.
Uma umuntu engenalo noma yiluphi uhlobo lweziqu zemfundo, angafinyelela izinga elimaphakathi lesifundo asifunayo ngalezi zidingo ezilandelayo:
Phasa isifundo esithile sokuqeqesha.
Dlulisa ukuhlolwa kokungena emijikelezweni yokuqeqeshwa yebanga eliphakathi.
Uphumelele ukuhlolwa kokungena eNyuvesi kubantu abangaphezu kweminyaka engama-25 ubudala.
Amakilasi ebanga eliphakathi
Uma unquma ukukhetha i-FP eneziqu ezimaphakathi kufanele wazi ukuthi kunezinhlobonhlobo zezifundo nezifundo. Izifundo ezikhiqiza kakhulu ezingeni labasebenzi yilezo zezempilo, ezentengiselwano nezokukhangisa, ezobuhle nokulungisa izinwele, nezokuphatha nokuphatha. Izifundo ezehlukene zizoqoqwa ngemindeni yobungcweti. Bese sikukhombisa amadigri ajwayelekile ahlukene akhona kanye neziqu ezihambisanayo:
Imisebenzi engokomzimba nezemidlalo: Uchwepheshe Ekuqhubeni Imisebenzi Yezemidlalo Yomzimba Emvelweni Wemvelo.
Ukuphatha nokuphatha: I-Administrative Management Technician.
I-agrarian: Uchwepheshe Wokukhiqiza Ezolimo; Uchwepheshe Kwezingadi kanye Nezimbali; Uchwepheshe Ekusetshenzisweni Nokugcinwa Kwendawo Engokwemvelo.
Ubuciko bezithombe: Uchwepheshe ku-Digital Prepress; Uchwepheshe Wokuphrinta Ngezithombe; I-Postpress ne-Graphic Finishing Technician
Ukuhweba Nokumaketha: Uchwepheshe Wemisebenzi Yezohwebo; Uchwepheshe Kwezokumaketha Kwemikhiqizo Yokudla.
Ugesi kanye ne-elekthronikhi: Uchwepheshe Ekufakeni Ugesi Nokuzenzakalelayo; Uchwepheshe Ekufakweni Kwezokuxhumana.
Amandla Namanzi: Uchwepheshe Kumanethiwekhi kanye Neziteshi Zokuhlanza Amanzi.
Ukwenziwa kwemishini: Uchwepheshe Bemishini; Isazi sokushisela kanye ne-Boilermaking; Jewellery Technician.
Ihostela Nezokuvakasha: Uchwepheshe Wezinkonzo Zokubuyisela; Ikhishi kanye ne-Gastronomy Technician.
Isithombe somuntu siqu: Uchwepheshe Wezobuhle Nobuhle; Uchwepheshe Wezinwele Nezimonyo Zezinwele.
Isithombe nomsindo: I-jockey ye-Video Disc kanye ne-Sound Technician.
Izimboni zokudla: Uchwepheshe wesitolo sokubhaka, i-Pastry kanye neConfectionery; Olive Oil and Wine Technician.
I-Informatics Nokuxhumana: Uchwepheshe ezinhlelweni zamakhompiyutha amancane namanethiwekhi.
Ukufakwa nokugcinwa: Uchwepheshe Wezindawo Zokukhiqiza Ukushisa; Uchwepheshe Weziqandisi Nokufakwa Komoya; I-Electromechanical Maintenance Technician.
Ukhuni, Ifenisha kanye Nokhokho: Uchwepheshe Wokufaka kanye Nefenisha; Uchwepheshe kwezokubaza kanye nefenisha.
Ikhemistri: Uchwepheshe Wezitshalo Zamakhemikhali; Uchwepheshe Wokusebenza Kwaselabhorethri.
Impilo: Uchwepheshe we-Pharmacy kanye ne-Parapharmacy; Uchwepheshe Wezimo Eziphuthumayo; Uchwepheshe Ekunakekelweni Kobuhlengikazi Okuyisizayo.
Ukuphepha kanye nemvelo: Uchwepheshe Wezimo Eziphuthumayo Nezokuvikela.
Izinsizakalo Zezenhlalakahle Nomphakathi: Uchwepheshe Ukunaka Abantu Abasesimweni Sokuncika.
Indwangu, Izingubo Nesikhumba: Ingcweti Yezingubo Zokugqoka Nemfashini.
Ezokuthutha kanye Nokulungiswa Kwezimoto: Uchwepheshe Bomzimba; Uchwepheshe ku-Electromechanics yezimoto.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Izinhlobo zamadigri aphakathi ku-Vocational Training
Kufundwa kanjani ngezimpelasonto
Imaphi amamaki aphezulu akhona?